သက်တန့်ချို: ကျွန်ုပ်နှင့် သွေးဆာနေသောမြို့တစ်မြို့ (ဇတ်သိမ်းပိုင်း + E book)
ကျွန်ုပ်နှင့် သွေးဆာနေသောမြို့တစ်မြို့ (ဇတ်သိမ်းပိုင်း + E book)
ဇတ်သိမ်းပိုင်းကို အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် နောက်ကျသွားတာ ခွှင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ ။ အခု ဇတ်လမ်းရှည်အစအဆုံးကို Ebook နှင့်တွဲတင်လိုက်ပါတယ် ။ ဇတ်သိမ်းပိုင်းအား Ebook အား Download ဆွဲပြီး ဖတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။ Ebook မှာ Link လေးတွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ် ။ ဇတ်သိမ်းပိုင်းဖတ်ချင်ရင် မာတိကာမှာ ဇတ်သိမ်းပိုင်းကို နှိပ်ပြီး တန်းဖတ်နိုင်ပါတယ် ။
Download Link: http://www.mediafire.com/?0gmrptqbfxnqy0d
` ကျွန်ုပ်နှင့်သွေးဆာနေသောမြို့တစ်မြို့´ ဇတ်လမ်းရှည်အား အပိုင်း ၁ မှ နေ၍ ဇတ်သိမ်းပိုင်းအထိ စိတ်ရှည် သည်းခံ၍ စောင့်ဖတ်ပေးကြသော ၀ဘ်ဆိုဒ်မှ သူငယ်ချင်းများ ၊ ဘလော့မှသူငယ်ချင်းများ ၊ Google Reader မှ စာဖတ်သူများ နှင့် ဘလော့ပို့စ်များအား Subscribe လုပ်၍ မေးလ်ထဲမှ ဖတ်ကြသော စာဖတ်သူများအား အထူးပင် လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ။
ဤ စာအုပ်လေးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ ကူညီပေးခဲ့သော ဒီဇိုင်နာ ကိုစိုးမင်းထွန်း (ဘိုးတော်) www.cgmyanmar.com အားလည်း လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ။
ဤ ၀ထ္ထုအား မည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာ ကူးယူ၍ ခံစားနိုင်ပါသည် ။ တစ်စုံတစ်ဦး မှနေ၍ အခကြေးငွေဖြင့် တဆင့်ပြန် လည်ရောင်းချခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ ။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ၍ လုံးဝအဆင်မပြေပါက ဂျီမေးလ်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ် ။ မေးလ် ထဲကို ပို့ပေးပါ့မယ် ။
TYZ August 6, 2010 at 5:18 PM
ဇာတ်လမ်းကရှည်ပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားလို့ နေ့တိုင်းလာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတဲ့အထိပါပဲ။ အားပေးလျှက်ပါ။။။
ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ဖတ်မလို့ လုပ်မှ ဒေါင်းလုတ် ဆွဲအုန်း အီးမေးလ် ထားခဲ့ ဘာညာ နဲ့ ကျနော် တို့ ကော်နက်ရှင် ကကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး နောက်ဆုံးမှ ဈေးကိုင်တာလား
ထောက်ခံပါတယ်...မဖတ်စေချင်ရင်လဲ မလာတော့ပါဘူး ... ဘယ်လိုမှ ကြိုးစားလို့ မရလို့ လက်လျော့ပြီး ပြန်သွားကြောင်းပါ.. ကျေးဇူးပါ ကိုသက်တန့် နောက်ဆုံးပိုင်း မသိရတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ကူးယဉ်လို့ ရတာပေါ့ ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးတော့ မင်းသားပဲ နိုင်ရမှာပေါ့ နော..
ဝက်ဝံလေး August 6, 2010 at 10:45 PM
အယ် အဲလိုလုပ်ကြနဲ့လေဂျာာာ မိသက် နင်ကလဲ နင်ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါအေ ငါတော့ ဒေါင်းသွားဘီ သိလား အစအဆုံးဖတ်တော့မယ် အေးဆေးပေါ့ ဟိ
I can download it but couldn't read anything. They are all blank. I can only see the photos. Please do sth about that. I couldn't wait to see the end. PLEASE!!!
And, it was suchagood plot, you are suchagood writer. I support you.
Anonymous January 5, 2011 at 1:01 AM
Witt Hmone September 22, 2012 at 8:49 AM
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကဘယ်လိုမှဒေါင်းလို.မရဘူးဖြစ်နေတယ်....အပိုင်း (၁) ကနေစပြီးဖတ်လာတာ အခက်ခဲမရှိဘူး....ဇာတ်သိမ်းကျမှပဲ ဖတ်လို.အဆင်မပြေဘူးဖြစ်ရတယ်...စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်...ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို အရင်အပိုင်းတွေလိုပဲ တိုက်ရိုက်ဖတ်လို.ရအောင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်....စွန်.စားခန်းဝတ္ထုတွေများများရေးနော်....
PhyoPhyo September 28, 2012 at 11:52 PM
download ယူသွားပါတယ် ဆရာသက်တန့်ရေ
တောက်လျှောက်ဖတ်လာပြီးမှ နောက်ဆုံးမှာ Download ဆွဲခိုင်းနေတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Con ကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူး ဒီအတိုင်းပဲတင်ပေးလိုက်ပါလား
နောက်ဆုံးခန်းကို အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ ............. တော်ပါပြီ မဖတ်တော့ဘူး
Hnin Zar June 20, 2013 at 2:50 PM
Hnin Zar June 20, 2013 at 2:51 PM
Hnin Zar June 20, 2013 at 2:53 PM
Nobel Sukyi June 10, 2014 at 4:10 PM
download မရဘူးးးးးးးး :(
Nobel Sukyi June 10, 2014 at 4:12 PM
download မရဘူးးးးးးးးးးးးး :(